Lukaku ayaa ka wanaagsan Diego Costa – dhawaana waxaan u wareejin doonaa Koox Weyn
HomeWararka MaantaLukaku ayaa ka wanaagsan Diego Costa – dhawaana waxaan u wareejin doonaa Koox Weyn
Mino Raiola oo ah wakiilka cusub ee weeraryahanka naadiga Everton ee Romelu Lukaku, ayaa aaminsan in ciyaaryahanka uu hadda kadib masuulka ka noqon doonaa ka wanaagsan yahay Diego Costa isla markaana uu dhawaan noqon doono kan ugu fiican qaarada Yurub oo dhan.
Laacibkan 21 jirka ah ayaa horyaalka ka dhaliyey 17 gool xili ciyaareedkii daynta ahaa ee uu Everton la joogay , laakiin wixii ka dambeeyey markii ay si rasmi ah u siisatay €35 million kagana qaadatay Chelsea xagaagii dhawaa, xidiga xulka Belgium wuxuu shabaqa ku hubsaday 8 gool oo qudha 29 ciyaarood oo uu kooxda xili ciyaareedkan u saftay.
Halka Costa, uu ka dhaliyey 18 gool , 22 kulan oo uu u saftay Premier League kooxda Chelsea, tan iyo intii ay kagala soo wareegtay €40m naadiga Atletico Madrid.
“Haddii aanu hore u kulmi lahayn labadayadu, ma noqdeen ciyaaryahan Everton jooga imika, Waxa suurto gal ahaan lahayd inuu meel kale joogi lahaa , ama laga yaabee inuu xiligan Chelseaba ka sii mid ahaan lahaa,” ayuu wakiil Raiola u sheegay warfidiyaha Sudpresse.
“Waxaan doonayaa inaan idiin cadeeyo: Romelu waa weeraryahan ka fiican Diego Costa Qabana kara inta uu ciyaaryahanka reer Spain qabtay xili ciyaareedkan.”
Raiola, oo sidoo kale metela ama wakiil u ah ciyaaryahanada Zlatan Ibrahimovic iyo Mario Balotelli, wuxuu barbar dhigay oo ku metaalay Lukaku inuu yahay “Paul Pogbaha weeraryahanada” waxaanu hoosta ka xariiqay inuu ciyaaryahankan geyn doono koox Champion ka ka qayb gasha.
“Wa garanayo inaad rumaysan tihiin awooda ninkan ku jirta iyo tayadiisa midna. Waa nin leh awood jidheed dhamaystiran, farsamo iyo xirfad intaba isku darsaday,” ayuu yidhi Raiola.
27/11/2017 Abdiwahab Ahmed
Manchester City vs West Ham 2 1 All Goals & Highlights EPL
Fabio Cannavaro Macasalaamayntii Uu U Dirayay Steven Gerrard Oo Qaldantay